Aiza no manomboka ny habakabaka?
Ny habaky ny olon-drehetra dia manomboka. Misy balafomanga eo amin'ny takelaka, ary amin'ny faran'ny lavaka lavidavitra, dia mitsambikina mankany amin'ny habakabaka izy. Saingy, oviana no miditra amin'ny toerana io tafio-drivotra io? Fanontaniana tsara izany tsy misy valiny mazava. Tsy misy sisin-tany voafaritra izay mamaritra ny toerana hanombohan'ny sehatra. Tsy misy tsipika ao amin'ny rivotra misy marika milaza hoe, "Space Thataway!".
Ny sisintany eo anelanelan'ny tany sy ny habakabaka
Ny teboka eo anelanelan'ny habakabaka sy ny "tsy habaka" dia tena tapa-kevitra ny amin'ny atmosfera.
Miala eto eto ambonin'ny tany amin'ny planeta, dia matevina manohana ny fiainana. Mitsangatsangana amin'ny rivotra iainana, mihamitombo tsikelikely ny rivotra. Misy tsiranoka amin'ny gaza miaina mihoatra ny zato kilaometatra ambonin'ny tany, saingy amin'ny farany, dia marefo loatra izy ireo ka tsy misy hafa amin'ny habetsaky ny vakim-paritra. Ny satelita sasantsasany dia namatra ny rivotra maloto avy amin'ny rivotra niaina tany amin'ny 800 kilometatra mahery (efa ho 500 km). Ny satelita rehetra dia milahatra tsara lavitra noho ny rivotra iainantsika ary heverina ho ara-dalàna "eny amin'ny habakabaka". Satria ny rivotra iainan'ny rivotra dia mihamitombo tsikelikely ary tsy misy sisin-tany mazava loatra, ny mpahay siansa dia mila "sisintany ofisialy" eo anelanelan'ny habakabaka sy ny habaka.
Ankehitriny, ny famaritana mazava momba ny toerana misy ny toerana dia tokony ho 100 kilaometatra (62 km). Antsoina koa hoe line Kármán izany. Izay miala amin'ny 80 km (50 km) amin'ny haavony dia heverina ho mpanamory sambon-danitra, araka ny filazan'ny NASA.
Fijerena ny sarin'ny atmosfera
Mba hahitana hoe nahoana no sarotra ny mamaritra hoe aiza no toerana hanombohan'ny sehatra, andramo ny fomba fiasan'ny atmosfera. Eritrereto io ho toy ny penina vita amin'ny gaza. Eo akaikin'ny habak'ity planeta ity ary matevina eo an-tampony. Miaina sy miasa amin'ny toerana ambany indrindra isika, ary ny ankamaroan'ny olona dia miaina anaty kilaometatra ambany kokoa.
Amin'ny fotoana handehanantsika eny amin'ny rivotra na hiakatra tendrombohitra avo dia miditra any amin'ny faritra izay misy rivotra matevina. Ny tendrombohitra avo dia avo hatramin'ny 4200 metatra sy 9144 metatra (14000 ka hatramin'ny 30,000 feet).
Ny ankamaroan'ny mpandeha dia manidina manodidina manodidina ny 10 kilometatra (na 6 kilaometatra)). Na dia ny fiaramanidina miaramila tsara indrindra aza dia mihanika mihoatra ny 30 km (98,425 metatra). Ny baolina kitra dia afaka mahatratra hatramin'ny 40 kilometatra (eo amin'ny 25 km) any ambony. Mirefy 12 kilaometatra ny Meteors. I Ny jiro any avaratra na atsimo (fanehoana an-horonan-tsary) dia tokony ho 90 kilaometatra (~ 55 m). Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia miakatra eo anelanelan'ny 330 sy 410 kilometatra (205-255 kilaometatra) ambonin'ny tany ambonin'ny tany ary tsara lavitra noho ny rivotra iainana. Tsara lavitra noho ny tsipika manasaraka izay manondro ny fiandohan'ny habaka.
Ny astronoma sy mpikaroka amin'ny planeta dia manasaraka ny faritra manodidina ny faritra manodidina ny tany. Misy ny "jeospace", izay io faritra io amin'ny faritra akaiky indrindra ny Tany, fa indrindra indrindra eo ivelan'ny tsipika mitovitovy. Avy eo, misy ny habaka "cislunar", izay faritra manitatra ivelan'ny Moon ary mahafaoka ny Tany sy ny Volana. Ankoatr'izany, ny sehatra interplanetary, izay manitatra manodidina ny Masoandro sy ny Planeta, miala amin'ny fetra amin'ny Oort Cloud .
Ny faritra manaraka dia sehatra iraisam-ponenana (izay mahafaoka ny haavon'ny kintana). Ankoatr'izany dia toerana malalaka amin'ny galactika sy habaka amin'ny intergalaktique, izay mifantoka amin'ny sehatra ao amin'ny vahindanitra sy eo amin'ny vahindanitra. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny habaka eo anelanelan'ny kintana sy ny faritra midadasika eo anelanelan'ny vahindanitra dia tsy tena lafo. Ireo faritra ireo matetika dia misy molekiola sy vovoka ary mahomby amin'ny famokarana vaksiny.
Ho an'ireo tanjon'ny lalàna sy ny fitazonana ny fitazonana, ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia mihevitra ny toerana hanombohana amin'ny toerana 100 km (62 km), ny lalain'i Kármán. Nantsoina hoe Theodore von Kármán, injeniera, ary physicista izay niasa mafy tamin'ny fiaramanidina sy ny astronautika. Izy no voalohany namaritra fa ny rivodoza eo amin'io sehatra io dia somary matevina mba hanohanana ny sidina fiaramanidina.
Misy antony tena tsotra mampisongadina ny fisian'izany fizaràna izany.
Manasongadina tontolo iray izay ahafahan'ny balafomanga manidina. Amin'ny teny tena mahasoa, ireo injeniera izay manamboatra fiaramanidina dia mila manome antoka fa azony atao ny mihazona ny lanjan'ny habaka. Ny fifehezana ny habakabaka mifandraika amin'ny tanjaky ny atmosfera, ny mari-pana, ary ny tsindry (na ny tsy fisian'ny iray amin'ny vaksiny) dia zava-dehibe satria ny fiara sy ny satelita dia tokony hiorina mba hanohitra ny tontolo tafahoatra. Ho an'ireo tanjon'ny fiarandalamby am-pilaminana eto an-tany, ireo mpamorona sy mpandraharaha ao amin'ny seranam-piaramanidina Amerikana dia namaritra fa ny "sisin-tany malalaka" ho an'ny nosy dia 122 km (76 km). Amin'io ambaratonga io, ireo nosy dia afaka manomboka "mahatsapa" ny tifitry ny atmosfera avy amin'ny bodofotsy ety an-tany, ary nisy fiantraikany ny fomba nitantanana azy ireo tany amin'ny tany. Mbola tsara lavitra noho ny tsenan'i Kármán izany, saingy raha ny marina dia misy antony tsara hananganana ny sambo, izay nitondra ny ain'olombelona ary nanana fitakiana ambony kokoa ho an'ny fiarovana.
Politika sy ny famaritana ny toerana ambony
Ny hevitra momba ny habaka ivelany dia ivon'ny fifanarahana maro izay mifehy ny fampiasana am-pilaminana ny habaka sy ny vatana ao aminy. Ohatra, ny fifanekem-piarovana iraisam-pirenena (nosoniavin'ny firenena 104 ary voalohany navoakan'ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 1967) dia mitazona ny firenena amin'ny fitakiana ny faritany manerantany amin'ny toerana ambony. Ny dikan'izany dia hoe tsy misy firenena afaka mitazona fitakiana eny an-kalamanjana ary mitazona ny hafa hiala amin'izany.
Noho izany, nanjary zava-dehibe ny mamaritra ny "faritra midadasika" noho ny antony ara-jeopolitika izay tsy misy idiran'ny fiarovana na ny injeniera. Ireo fifanekena izay mametraka ny sisin-tany dia mamaritra izay mety ataon'ny governemanta na eo akaikin'ny vatana hafa eny an-habakabaka.
Izy io koa dia manome torolalana momba ny fampandrosoana ny zanatanin-dehilahy sy ny asa fikarohana hafa amin'ny planeta, moons, ary asteroïde.
Nanafatra sy navoakan'i Carolyn Collins Petersen .
Ahoana ny fomba ampiasana ny dingana mineraly hamantarana ireo karazana vato
Hery - Mandritra ny fotoana
Momba ny Dating Isotopic: Takelaka ho an'ny Geologic Time
Fanambarana, fanendrena, ary ohatra
Allotope definition and examples
Astronomie 101 - Mianatra momba ny kintana
Tianao ve ny Teleskopo?
Ny Geologists manan-kery indrindra amin'ny fotoana rehetra
The 8 Best Geology Apps for iPhones, iPads and Androids
Nahoana no antsoina hoe Noble?
Ahoana ny fomba fampiasana ny fanontana frantsay 'à'
Ny faritany 23 ao Shina
Profile of John E. Du Pont
Ny tsy fahombiazan'ny Thomas Alva Edison
Fifanakalozan-kevitra Dialogue - Ao amin'ny trano fisakafoanana iray
Top Baseball Players MLB
A Overview of The Theory Central Place Christaller
Inona no atao hoe Nanotubes Carbon
Kitapom-panesoana amin'ny kitapo-pifamoivoizana
Inona no tokony hataonao raha tsy miasa ianao
Ny dingana sarotra handrarana mpiasa mpiara-miasa
Ny fahafatesana tampoka lava indrindra dia miala amin'ny PGA Tour
Ny fikolokoloana ny lamosina, ny lozam-pifamoivoizana ary ny fanofanana ny mpilomano
Fomba fanao taty John Adams
University of Colorado Denver Admissions
Jereo ny habetsahan'ny varimbazimbana avy amin'ny Rock Obsidian
Ahoana no nitadiavan'ny Frameris ny Lalàm-panorenana Amerikana?
Inona no manasazy fehezanteny amin'ny teny frantsay?
Ny biography of Nicolaus Copernicus
Alice Walker: Mpandresy Pulitzer Prize
'Hevitra ho an'ny Wuthering Heights'